Fadlan:Ka qeyb qaado dib u dhis lagu sameynayo masjidka Ibnu Cabbaas ee deegaanka Gandarshe.
Maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka Ibnu Cabbaas ee deegaanka Gandarshe ayaa Muslimiinta ka codsaday inay ka qeyb qaataan dhismo ka socda Masjidka. Waxaa go’ay dhaqaalihii lagu dhisayay Masjidka xili aanan wali la dhameestirin dhismaha masjidka. Waxaan walaaladda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ku bogaadinaynaa oo leenahay ku tartama ka qayb qaadashada dhismaha Masjidka. في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ ...	Read More »
Dhagayso Warka Subaxnimo 16-07-2018
Linkiga hoose ka dhagayso Warka Subaxnimo ee Idaacadda Al-Furqaan Oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan ka dhagayso War subax 16 07 2018 Read More »
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump Oo weerar Afka ah ku qaaday Midowga Yurub iyo Ruushka.
Madaxweynaha dhimirka la’ ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladaha midowga Yurub iyo Ruushka, isagoo ku tilmaamay iney yihiin dad xifaaltan kula jira Maraykanka. Trump oo waraysi siinayay CBS oo laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa sheegay in Ruushka, Shiinaha iyo midowga Yurub ay taxaddi iyo culees ku hayaan dowladda Maraykanka. Wuxuu sheegay in dowladda Ruushka ...	Read More »
Barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan ka dhageyso barnaamijka dhuuxa 15 07 2018	Read More »
Qabiilka Geeladle oo kamid ah beesha Raxanweyn, ayaa Khamiistii lasoo dhaafay munaasabad ka dhacday degaanka Madiinatul-kheyr, ku doortay Ugaas guud, taasoo ka dhigan iney hadda wixii ka dambeeya leeyihiin hogaan dhaqan oo ay ku mideysan yihiin meel walboo ay joogaan. Xafladda caleema saarka oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka ...	Read More »
Wararka ka imaanaya magaalada Afgooye oo 30KM u jirta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in halkaas lagu dilay sarkaal sare oo katirsan sirdoonka dowladda. Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duleedka Afgooye waxay ku dileen Korneel Guudle Maxamed Nuur oo ahaa ku simaha taliyaha Nabadsugida magaalada Afgooye. Korneelka markii la dilay kadib waxaa laga qaatay gaari nooca ...	Read More »
Yahuudda Oo duqeymo ka geystay magaalada Qazza ee Filastiin.
Ciidamada Yahuudda ee xooga ku heysta dhulka Filastiin, kuna sugan deegaanna ku yaala xuduud beenaadka dhulka ay iyagu xooga ku heystaan iyo magaalada Qazza ayaa duqeymo ku garaacay magaalada Qazza oo ay ku noolyihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah. Duqeymaha oo u muuqday mid lagu beegsanayay saldhigyo iyo goobo milliteri oo ay ku suganyihiin kooxaha Muqaawamada Filastiin ayaa lagu soo ...	Read More »
Warbixin ay soo saartay waxa loogu yeero hay’adda xuquuqul Insaanka ee “Human Rights Watch ayaa lagu soo bandhigay tacadiyo iyo gaboodfallo sanado badan ay ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaatka Soomaalida ee Lyu Police-ka kula kacayeen dadka Muslimiinta eek u nool gobolka Soomaali galbeed. Warbixintan oo ka kooban 88 page ayaa cinwaan looga dhigay “Tacadiyo ka jira xabsiga Soomaali-Galbeed” waxayna si qoto ...	Read More »
Tobaneeyo Askari Oo lagu dilay Weerarkii Nawaaxiga Madaxtooyada iyo Qaar kamid ah Raggii Weerarka fuliyay oo Soo laabtay.
Ciidamo katirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa Sirdoonka ayaa ku le’day howlgalkii maalintii shalay ay ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen nawaaxiga Madaxtooyada Villa-Soomalia. Weerarka oo lagu daah furay qaraxyo waaweyn, islamarkaana rag katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay dagaal fool ka fool ah la galeen ciidamada dowladda ee ilaalinayay madaxtooyada iyo xarumaha muhiimka ah ayaa khasaare adag lagu ...	Read More »
qeybta hoose waxaad kala degi kartaa warka subaxnimo ee idaacada islaamiga ah alfurqaan. Halkan kala deg warka subaxnimo 15 07 2018 Read More »